Khabiirka Cilmiga ah ee ku saabsan Hacking weeraro - Sidee & Sababta?
Dad badan oo u jeestay isticmaalka internetka, halis guud ayaa soo baxday - jebinta.Ugu horreyntii, ereyga ayaa tilmaamaya habka barashada qaababka kombiyuutarka iyo luuqadaha barnaamijka. Waqtigaas, ereyga wuxuu ku dhacay shaashadmacneheedu waa inay muujinayaan awoodda ay u marin karaan shabakad kombuyuutar ama amniga nidaamka.
Igor Gamanenko, oo ka mid ah khabiirada ugu waawayn Sare ,waxay eegaysaa qoto dheer ee sababaha iyo ujeedooyinka weerarrada jebinta.
Guud ahaan, bogga shabakadaha internetka ee khatarta ah 5 nooc oo weerar ah oo ka dhan ah shabakadaha iyo kombiyuutarada. Kuwaas waxaa ka mid ah:
1. Weerarrada Adeegga Diidmada Adeegga (DDoS)
Kuwani waxaa loogu talagalay in lagu dhiso nidaamyada aan haysanin sifooyin ammaan oo ku filan iyodiiradda saara dekadaha furan iyo sidoo kale isku xirka shabakadda. Caadi ahaan, weerarrada DDoS waxay raadinayaan inay wiiqaan nidaamka adigoo u diraya codsiyo badantaas oo sababaysa shabakada ama nidaamka lagu burburiyo ama la xiro. Inkastoo tan, nidaamyada intooda badan ay adkeeyaan weerarrada waxayna si fudud u soo kabanayaan.
Tani waa software lagu qeexay sida freeware muhiim ah ama shareware. Software-ka qarsoodi ahwaxaa inta badan lagu rakibay by webmaster ah oo aan ogayn waxa software dhab ah ka kooban.
Sida caadiga ah, barnaamijku wuxuu ka kooban yahay muuqaalo furan albaabka dambe ee nidaamkaaga si aad u oggolaatogelitaanka aan la ogolayn ee nidaamkaaga mar kasta oo aad isticmaasho software-ka. Beddel ahaan, barnaamijku wuxuu leeyahay kicin taas oo ay si gaar ah u dejisaydhacdooyinka ama taariikhda. Marka kicin, software wuxuu xiraa nidaamkaaga ama shabakadda. Spyware waa software yar oo waxyeello leh taas oo ahsida caadiga ah loo isticmaalo si loo uruuriyo macluumaadka kaas oo markii danbe lagu iibiyo shirkadaha suuq geynta.
Tani waa kuwa ugu caansan websaydhada. Heerka ugu hooseeya, waa abarnaamij khaas ah oo awood u leh in uu is-beddelo. Fiirinta ugu horreysa ee fayraska waa in la weeraro lana burburiyo nidaamka hoyga..Caadi ahaanTusaalooyinka barnaamijyada halista ah waxaa ka mid ah Frodo, Cascade iyo Tequila.
Kuwani waa goobo hoosaadyo ah oo ka faa'iideysanaya daciifnimada amniga ee tiknoolajiyada qaarkoodsi aad udhaqaajiso biraawsarkaaga si aad uga qayb qaadatid hawlo aan fasax lahayn.
Tani waa nasiib daro isku-nuqul ah oo kheyraad qaali ah ku jira nidaamkaaga illaa intawuxuu ku dhacaa culeys badan wuxuuna joojiyaa shaqeynta. Goolasha ayaa loogu talagalay noocyo gaar ah oo kombiyuutar kuwaas oo ka dhigaya kuwo aan waxtar lahayn hababka qaar.
Sidaa daraadeed, maxaa loo sameeyaa shabakadaha shabakadaha internetka ee ku lug leh falalkaas xun?
1. Si aad u isticmaasho oo aad u isticmaasho habka aad u isticmaasho Shirkadda Isgaarsiinta Internet-ka ee waxqabadyo sharcidarro ah-ilaa iyoKiisaska badanaa waxay ku lug leeyihiin hawlo sharci darro ah, waxay u baahan yihiin inay qariyaan hawlahooda. Si arrintan loo sameeyo, waxay la wareegaan kambiyuutarada si ay u kaydiyaan waxyaabaha sharci darada ahama ujeedooyinka isgaarsiinta.
2. Si aad u xadido macluumaadka.
3. Wixii madadaalo iyo madadaalo.
4. Shaqaalaha curyaamiyaadka aargoosiga ah ayaa ka firdhiyey shirkad ama ganacsi raali gelin ah, isbahaysiguna waawaxay u badan tahay inay jabiyaan nidaamkaaga weerarka aargoosiga ah.
5. Wixii faafaahin ah - qaar ka mid ah jilayaasha qaar waxay jecel yihiin sheeko waxayna samayn lahaayeen wax kasta oo ay ku ogaadaan.
6. Si loo tijaabiyo ama loo tijaabiyo nidaamka-mararka qaarkood, macallimiintu waxay codsadaan khabiiro ICTsi ay u baaraan nidaamyadooda si ay u aqoonsadaan daciifnimadeeda isku day lagu doonayo in lagu xoojiyo amniga.
7. Sababtoo ah cudur aan loo yaqaan 'Asperger Syndrome'. Dadka qaba dhibaatadanwaa qunyar-yeelasho, laakiin waxa ay awood u leeyihiin inay xoogga saaraan dhibaatada muddo dheer.
8. Ka soo jiidashada..
9. Si aad u ogaato waxa ay yihiin asxaabta, lamaanayaasha, kuwa iskaashiga ganacsiga ama xubnaha qoysku ay yihiin.
10. Si aad u hesho xuquuqda shakiga.
11. Caqabadda caqliga.
12. Wixii dhaqaale faa'iido - inkastoo inta badan shabakadaha internetka ee khatarta ah ma sameeyaan lacag, cyberdambiilayaashu waxay ku noolaadaan noloshooda iyaga oo kaashanaya khiyaanada kaararka deynta.
Dadka halista ugu jira weerarada xun
shirkadaha amniga internetka - shirkadahaasi waxay leeyihiin amniga ugu fiican ee iyaga ka dhigayaoo ah bartilmaameed soo jiidasho leh oo loogu talagalay kaysariyayaasha
Shirkadaha qaaliga ah-bogagga xisbiyada siyaasadeed iyo shirkadaha caalamiga ah waa kuwasida caadiga ah bartilmaameed aan la xakameyn oo loogu talagalay shabakadaha casriga ah ee doonaya inay helaan xuquuqda jahwareerka
Qof kasta oo goobta sita-xitaa goobaha e-commerce waxaa inta badan bartilmaameed u ah dambiilayaasha internetka,Khawariistayaasha ma fahmaan xiridda nidaamka nugul
Sidee ammaanka amniga ee websaydhku
Milkiilaha bogga, waxaad u baahan tahay inaad ka shaqeyso sidii aad uga ilaalin lahayd boggagaaga inaadan ka jooginla jabsaday. Ku adkee sida booqdayaashu u galaan website-kaaga ganacsiga waa hal dhinac oo kaa caawin kara ilaalinta goobtaada. Hubi in mayaAqoonsiyada ayaa la soo bandhigaa. Samee boggaaga user-friendly adiga oo eegaya ammaankaaga internetka Source .